जागीर छोड्नुअघि सोच्नैपर्ने केही कुरा | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी जागीर छोड्नुअघि सोच्नैपर्ने केही कुरा
on: २ मंसिर २०७३, बिहीबार ००:०० रोजगारी
जागीर छोड्नुअघि सोच्नैपर्ने केही कुरा
आफ्नै इच्छा वा बाध्यताले नै किन नहोस्, जागीर छोड्ने काम तनावपूर्ण हुने गर्छ । जागीर छोड्ने कुरामा आफू निश्चित भएपछि राजीनामा दिने क्रममा धेरैजसोले गम्भीर गल्ती गर्छन् । खासगरी आफ्नो ‘बोस’ वा कार्यालयसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गरेर हार्दिकतामा टुङ्ग्याउनुको सट्टा उनीहरू भएको सम्बन्धलाई झन् खराब बनाउन उन्मुख भइदिन्छन् । जागीर छोड्ने निर्णय गर्नुपूर्व यो निर्णय सही छ भन्नेमा पूर्णतः निश्चित हुन आवश्यक हुन्छ । ‘ह्या ! छोड्ने त हो, बालमतलब’ भन्ने खालको सोच र प्रस्तुतिले व्यावसायिक जीवनमा राम्रो गर्दैन । त्यसैगरी, भएको जागीर छोड्नुपूर्व सोच्नैपर्ने विषय धेरै हुन्छन् । राजीनामा गर्नुपूर्व विचार पुर्‍याउनुपर्ने केही कुरा यस्ता छन् !
विकल्पमाथि विचार :
तपाईंसँग नयाँ कामको ‘अफर’ छ त ? यदि छ भने हालको काम र नयाँ काम दुवैलाई तुलना गरेर त्यसका फाइदा बेफाइदाको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । काम गर्ने वातावरण, पारिश्रमिक, दायित्व आदिको तुलना गरेर उपयुक्त विकल्पको छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ । नयाँ काममा प्रगतिको अवसर कत्तिको छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यदि नयाँ काम सबै हिसाबले अहिले गरिरहेको कामभन्दा उत्तम छ भने राजीनामा गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । तर, तपाईंसँग नयाँ कामको प्रस्ताव छैन भने जागीर छोड्नका लागि नयाँ कामको खोजी थाल्नुहोस् । बेरोजगार रहेको अवस्थामा नयाँ जागीर पाउन जागीरमा रहिरहेको बेलामा जति सहज नहुन सक्छ । एउटा पुरानो भनाइ छ, ‘तपाईंसँग काम छ भने नयाँ काम खोज्न सजिलो हुन्छ ।’
जानकारी दिने समय :
तपाईं र रोजगारदाताबीचको सम्झौतामा जागीर छोड्नुपूर्व कति समयअगावै जानकारी दिनुपर्छ भनिएको छ, सोको पालना गर्नुहोस् । यदि छैन भने पनि कम्तीमा १५ दिनपहिल्यै आफूले काम छोड्ने जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा रोजगारदातालाई तपाईंको विकल्पमा नयाँ मानिस भर्ना गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त हुन्छ भने तपाईंको व्यावसायिक धर्म पनि पूरा हुन्छ ।
कसलाई भन्ने ?
सबै कुरामाथि राम्रोसँग विचार गरेर तपाईंले जागीर छोड्ने निर्णय गरिसकेपछि यस विषयको पहिले जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई दिनुपर्छ । तपाईंले जागिर छोड्न लागेको कुरा हाकिमले अरू कसैबाट सुन्नु राम्रो कुरा हुन सक्दैन । साथै, यस विषयलाई असम्बन्धित व्यक्ति वा सहकर्मीहरूबीच अनावश्यक चर्चाको विषय कहिल्यै नबनाउनुहोस् । आफ्नो गमनलाई सकेसम्म सम्मानजनक बनाउनेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ ।
कसरी भन्ने ?
जागीर छोड्ने औपचारिक तरीका राजीनामापत्र नै हो । तर, परिस्थितिअनुसार तपाईंले यस्तो जानकारीका फोन या ईमेलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
के भन्ने ?
आफूले छोड्न लागेकोभन्दा धेरै कुरा नभन्नु नै राम्रो हुन्छ । तपाईंको राजीनामापत्रमा तपाईंलाई कम्पनीले लगाएको गुण, दिएको फाइदाबारे सकारात्मक टिप्पणी र धन्यवाद समावेश गर्नुहोस् । तर, कुनै पनि नकारात्मक वा अनावश्यक टिप्पणी/गुनासो तपाईंको व्यावसायिक जीवनको सफलताको अवरोधक बन्न सक्छ । काम छोड्ने प्रक्रियालाई पूर्णतः हार्दिक बनाउन सक्नु नै तपाईंको सफलता हो । राजीनामाको विषयलाई ‘गसिप’ बनाउदा थुप्रै नकारात्मक टिप्पणी फैलने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, आफ्नो राजीनामाबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्नु नै बेस हुन्छ ।
यदि तपाईं कुनै नयाँ काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने सो विषयलाई हाकिमसमक्ष स्पष्टसँग राख्नु राम्रो हुन्छ । पारदर्शिता व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण योग्यता हो । तपाईंले आफ्ना हाकिम वा आफ्ना साथीहरूसँग ढाँट्नुभयो वा नकारात्मक कारण प्रस्ततु गर्नुभयो भने त्यसले तपाईंको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । याद राख्नुहोस्, तपाईंको आगामी रोजगारदाताले तपाईंको भूतपूर्व हाकिमसँग तपाईंबारे कुरा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा तपाईंको सच्चाइ सहयोगी बन्न सक्छ ।
सिफारिशपत्र/अनुभवको प्रमाणपत्र :
जागीर छोड्दा व्यवस्थापकबाट अनुवभको प्रमाणपत्र लिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो तपाईंको योग्यताको प्रमाणपत्र हो भन्ने नभुल्नुहोला । हरेक अनुभव तपाईंको भविष्यको सहयात्री बन्न सक्छ ।
सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण :
आफ्नो जिम्मामा रहेका सबै कुरा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्छ । कुनै पनि सामग्री बुझाउन, हिसाब फरफारक गर्न बाँकी नरहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।